Faysal Cali Waraabe Muwaaddin Xalaal Ah – W/Q: Rasheed Cali Meigag Samater | Somaliland Post
Home Maqaallo Faysal Cali Waraabe Muwaaddin Xalaal Ah – W/Q: Rasheed Cali Meigag Samater
Faysal Cali Waraabe Muwaaddin Xalaal Ah – W/Q: Rasheed Cali Meigag Samater
Qoraalkan yar ee kooban waxa igu kellifay kadib markii aan dhegaystay Khudbaddii qiimaha badnayd ee uu jeediyay Guddomiye Faysal 18kii May 2020 oo run ahaantii si gaara ii taabatay.
Waxan dib u jalleecay Faysal iyo muddadii uu siyaasadda ku jiray iyo dhacdooyinkii kala duwanaa ee Somaliland soo martay iyo doorkii Faysal ka qaatay xaaladahaas oo qaarkood aad u adkaayeen go’aanadiisii halkuu iska taagay.
Anigu marar badan waxan qayb ka ahaa xisbiga UCID oo aan ka gaadhay Guddomiyihii xisbigaas ee dalka U.K. waxan ka baxay xisbigaasi anoo diiddan go’aankii Faysal ee Musharraxnimaddii Jamaal Cali Xuseen.
Muddo ka dib aniga iyo dad badan oo aanu isku fikir ahaynba waxanu ku soo gunaanadnay in Faysal ku saxsanaa go’aankaasi annaguna aanu ku degdegnay ama ku qaldanayn inanu Faysal ku diidno go’aankaas oo markaa noola muuqday mid qallafsan. Waxa kaloo ka mid ahaa doorki i uu iska taagay doorashadii la galay, waxase caddaatay in dal iyo dadba ay dan u ahayd in Jamaal ka hadho tartankaasi waqtigaas oo haddii kale kala-jab iyo cid aan hanan karayn qarankani ku soo baxaan talada dalka, Faysalna go,aankaas aanu ka cadhoonay wuu ku saxsaxsanaa, haddii aanu sidaa yeelin oo taayadii socotana Jamal ma soo baxeen dalkan iyo dadkanuna Ilaahay uuni ogyahay halkay ku dhici lahaayeen.
Waxa aan shaki ku jirin in Faysal mar walba huro oo aanu ka daalin in geed dheer iyo mid gaabanba u fuulo in Somaliland wax noqoto nabad iyo horumarna ay ku waarto.
Faysal runtii wuxuu u qalmaa xaqna u leeyahay in haddii uu mar kale tartan siyaasdeed galo in si aqlabiyad ah loogu cimaamado jagada madaxnimo ee dalka, sababtoo ah marna lama hayo Faysal oo hagardaamo u gaystay Qarankan, wax tar mooyaane, waa nin cadawga Somaliland iyo kuwa necebba uu quus gooya si cadna ula dagaallama – xataa haddii kuwaasi yihiin qoyska uu ka dhashay oo qaarkood magac iyo maamuus sare ku dhex leeyihiin qoyskiisa iyo meelo kaleba. Faysal kama gabbado toosinta xukuumadda markii loo baahdo, hase yeeshee maaha dadka Mucaarad baad tahay u ceebeeya dalka jecelna qaawinta qarankeenna cadawga badani ku wareegsan yahay. Waxana u dheer inuu Faysal yahay nin Ahlu diin ah oo Alle ku xidhan una tudhaya dalkiisa, dadkiisa, diintiisa iyo Aakhiradiisaba
Waxan ku gebagebaynayaa in dadaka reer Somaliland hoos iyo korba u ogaadaan una qiraan Faysal Cali Waraabe tacabka muddada dheer uu u huray jiritaanka iyo qaranimada dalkiisa Barakaysan ee Somaliland. Taariikhda ayaa qori doonta ee waa in loo ogaado inuu yahay siyaasigii ugu horreeyay ee danta guud ka door biday fikirka tolkiis iyo qabyaalad xataa haddii xisbigiisu ku luminayo taageerayaal badan oo aan ka mid ahaa. Anna waxan leeyahay Cimri barako leh iyo caafimaad ku raag aad noogu adeegto muddo dheer. Amin
Qalinkii: RASHEED CALI MAYGAAG SAMATER
Gudd. Jaaliyaadda Somalida W. London